युगसम्बाद साप्ताहिक - निर्वाचनमा भाग लिनुको अर्थ राष्ट्रिय स्वाधीनता समाप्त पार्ने कामलाई स्वीकृति दिनु हो - सीपी गजु
Wednesday, 11.13.2019, 03:09pm (GMT+5.5) Home Contact
निर्वाचनमा भाग लिनुको अर्थ राष्ट्रिय स्वाधीनता समाप्त पार्ने कामलाई स्वीकृति दिनु हो - सीपी गजु
Friday, 07.05.2013, 07:20pm (GMT+5.5)
० नेकपा–माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठकले लिने निर्णयको सार कस्तो हुन्छ ? केही बताइदिन मिल्छ ?
यो बैठक समसामयिक विषयमा निर्णय गर्नकै लागि आयोजना गरिएको हो । यसमा मुख्य विषय चाहिं निर्वाच नै हो । निर्वाचन सम्बन्धी विषयमा छलफल भैरहेको छ । हामीले यसअघि पनि यथास्थितिमा निर्वाचनमा सहभागी हुँदैनौं भन्दैआएको र केही मागहरू अगाडि सारेका थियौं । ती मागहरूलाई पूर्ण रुपले उपेक्षा गरियो । हामीले अन्तिमसम्म माग पूरा हुन्छन् कि भन्दै प्रतिक्षा गर्या तर ती माग पूरा हुने सम्भावना देखिएन । यसकारण अब हाम्रो पार्टी निर्वाचनमा भाग नलिने दिशातिर नै गएको छ । अहिले धेरैजसो केन्द्रीय सदस्यहरूको भनाइ पनि यो निर्वाचनलाई वहिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने हो । वहिष्कार गर्नुको अर्थ चुप लागेर चुनावमा भोट नहालेर वहिष्कार गर्ने कि कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भैरहेको छ ।
हाम्रो पार्टी एउटा सक्रिय पार्टी भएको हुँदा हामीले जुन नीति लिन्छौं त्यो नीति सक्रियतापूर्वक लागू गर्छौं । हामीले निर्वाचनमा भाग लिए पनि सक्रियतापूर्वक लिने र वहिष्कार गरे पनि सक्रियतापूर्वक नै वहिष्कार गर्ने हो । ३३ दलको मान्यता पनि यस्तै रहेको हुँदा अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन हुने सम्भावना म देख्दिन ।
० तपाईंको भनाइको मतलब निर्वाचन वहिष्कार भनेको आफू सहभागी नहुने मात्र नभएर अरुलाई पनि सहभागी हुन नदिने वा विथोल्ने भन्ने हो ?
सक्रिय वहिष्कार भनेको त्यही हो । यदि यो निर्वाचन सम्पन्न भयो भने कसरी हाम्रो राष्ट्रियता समाप्त हुन्छ, कसरी देशमा निरंकुशता फर्किन्छ, कसरी हाम्रा प्राकृतिक स्रोत साधनलाई अरुले कब्जा गर्छन् र कसरी नेपाली जनताका जनजीविकाका समस्या झन् गम्भीर भएर आउँछ भन्ने कुरा हामी जनतालाई बोध गराउँछौं र यो निर्वाचन वहिष्कार गर्न पनि अपील गर्छौं । हामीले मात्र हैन कि आम जनताले नै यो निर्वाचन वहिष्कार गर्छन् त्यसकारण यो निर्वाचन हुँदैन ।
० यसको मतलब अब तपाईंहरूले मतदान गर्न जानेहरूलाई बीचमै रोक्ने हुनुभयो ?
बाटोबाटोमा गएर किन रोक्नु पर्या । हामी आमसभा गर्छौ, पोष्टर टाँस्छौं, पर्चा छर्छौ र जनतालाई बुझाउँछौं । हामी जनतालाई आफैं सक्रिय बनाएर निर्वाचन वहिष्कारको पक्षमा उभ्याउँछौ, जनतालाई नै परिचालन गरेर निर्वाचन वहिष्कार गर्छौं ।
० मैले जान्न खोजेको कुरा के हो भने तपाईंहरू निर्वाचन वहिष्कार मात्र गर्ने कि अवरोध नै खडा गर्ने भन्ने हो । वहिष्कार र अवरोध त फरक कुरा हो नि हैन ?
वहिष्कार दुई किसिमका हुन्छन् । एउटा निस्क्रिय प्रकारको वहिष्कार र अर्को सक्रिय वहिष्कार । निस्क्रिय वहिष्कार भनेको आफूले भाग नलिने भन्ने हुन्छ भने सक्रिय वहिष्कार भनेको त्यो निर्वाचन नहोस् भन्नका निम्ति विभिन्न कार्यक्रमद्वारा प्रयास गर्ने । हाम्रो सक्रिय वहिष्कार हो ।
० त्यसो भए तपाईंहरू तत्काल आन्दोलनमा जानुहुन्छ ?
यो वर्षामा त आन्दोलनत हुँदैन । जनता खेती किसानीतिर व्यस्त छन् । यो काम गर्ने मौसम हो । बाढी पहिरो अनेक समस्या छन् । त्यसकारण जनआन्दोलनको ठूलो कार्यक्रम हुँदैन । यसबीचमा प्रचारप्रसार, जनताको घरदैलोमा जाने किसिमका कार्यक्रम चाहिं हामीले गर्छौं । अनि निर्वाचन मंसिर चार गतेलाई नै कायम भयो भने असोजपछि बल्ल हामी अलि ठूलठूला कार्यक्रमहरू घोषणा हुन्छ ।
० हैन निर्वाचन वहिष्कार र स्वीकारले मुलुकमा कस्तो खालको असर पर्छ र यसको निकासका लागि के उपाय अपनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा तपाईंहरू जस्तो जिम्मेवार दलले सोच्नु पर्दैन ?
एकदम सोचेर नै निर्वाचन वहिष्कारको निर्णय गरिएको हो । यो निर्वाचन संविधानसभाको निर्वाचन हो, यो कुनै गाविसको निर्वाचन जस्तो हैन । संसदको निर्वाचन पनि हैन । संसदको निर्वाचनमा कतिपय पार्टीले त्यतिखेर उठेका मुद्दाहरूलाई लिएर पनि वहिष्कार गर्न सक्छन् । हरेक चार वर्षमा हुने निर्वाचनमा कसैले भाग लिने, कसैले नलिने हुनसक्छ तर यो त संविधानसभाको निर्वाचन हो नि । संविधानसभाको निर्वाचनमा नेपालमा भएका सबै राजनीतिक दलहरू, संघ संगठनहरू, सबै जनवर्गको प्रतिनिधित्व हुने खालको भयो भने त्यो वास्तविक संविधानसभा हुन्छ । धेरैजसो पार्टीहरूले भाग नलिने र यिनै चार दलले मात्र निर्वाचनमा भाग लिने, यिनैले घोषणा गरेको संविधानसभा अनि त्यसैले बनाएको संविधानलाई कसले मान्ने ? त्यसको के अर्थ हुन्छ र ? त्यो त कागजको खोस्टो मात्र हुन्छ । यस्तो अवस्थामा संविधान बनाउनुको कुनै अर्थ हुँदैन ।
० तपाईंहरू सहभागी बन्नुभो भने त त्यसले सार्थकता पाउँछ भने तपाईंहरू निर्वाचनदेखि किन डराइरहनुभएको त ?
निर्वाचनदेखि डराएको हैन । अहिलेको निर्वाचन त चार दलको न हो । यो निर्वाचन चार दलको हुकुमीबाट बनेको खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले गराउँदैछ । यो सरकार आफैं असंवैधानिक छ । राष्ट्रपतिले २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जुन जारी गरेका छन् त्यसलाई नसच्याउने हो भने भोलि गएर हामीले संविधान बनायौं भने पनि त्यसलाई राष्ट्रपतिले नै खारेज गरिदिनेछन् । चार दलले सिफारिश गर्छन् राष्ट्रपतिले खारेज गर्छन् । त्यस्तो संविधान बनाउनतिर लाग्नु त नौटंकी नै हो ।
अर्को कुरा के हो भने यो सरकारका मन्त्रीहरूले हामीलाई त चार दलले बनाइदिएको, यी चार दलप्रति वफादार छौं भन्छन् । त्यो वफादारिता त हुने नै भयो । जसले अवकाश पाइसकेका कर्मचारीलाई अर्को जागीर दियो उनीहरूप्रति नै जवाफदेही र जिम्मेवार हुने भैहाले । अनि चार दलको आदेशमा निर्वाचनमा यो निर्वाचन हुँदैछ भनेपछि यसले त चार दलको हितमा मात्र काम गर्छ । आम जनताको हितमा काम गर्दैन । त्यसकारण चार दलको आदेशमा चार दलले जस्तो निर्वाचन चाहन्छ उनीहरूले त्यस्तै निर्वाचन गराउनेछन् । चार दलले जस्तो नतिजा घोषणा गर भन्छन् सरकारले त्यस्तै नतिजा घोषणा गर्छ ।
० तपाईंले त्यसो भनिरहे पनि जनतामा त निर्वाचनको आकर्षण बढ्दै गएको छ भनिन्छ नि ?
यो निर्वाचनप्रति जनताले विश्वास गर्ने कुनै ठाउँ छैन । हामीले निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिइसकेपछि के हुन्छ भने नैतिक दृष्टिकोणले जस्तो संविधान जारी गरे पनि मान्छौं भन्नुपर्याे । किनभने आफू त्यही प्रक्रियामा गैसकेपछि, खेलको मैदानमा प्रवेश गरिसकेपछि हारे मान्दिन र जिते पछि मात्र मान्छु भन्न पाइएन । जतिसुकै झेल गरेर गोल गरेको भए पनि हारेको हो भन्न करै लाग्छ । त्यसकारण यो निर्वाचनमा हामीले भाग लिनुको अर्थ यो निरंकुशतालाई, यो राष्ट्रिय स्वाधीनता समाप्त पार्ने जुन काम भएको छ त्यसलाई स्वीकृति दिनु हो । निर्वाचनमा भाग लिएपछि हामीले उठाउँदै आएका मुद्दाहरूको पनि अर्थ रहँदैन । निरंकुशता र असंवैधानिक सरकारलाई मान्यता दिएको ठहर्नेछ र २५ बुँदेको विरोधको पनि केही अर्थ रहँदैन ।
० हैन, तपाईंहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नेसम्मको बहस हुन थालेको छ । चार दलले सरकार परिवर्तन बाहेक सबै कुरामा सहमति गर्न सकिन्छ भनिरहेका बेला तपाईंहरू चाहिं किन पूर्व अडानमै कायम रहनुभएको ?
मन्त्रिमण्डलमा हाम्रा नाममा दुईजना पूर्व सचिव थपेर यो समस्या हल हुँदैन । यो समस्याको जड भनेको २५ बुँदे आदेश हो । पहिला त्यो खारेज हुनुपर्छ । २५ बुँदे खारेज नभैकन यो चुनावको कुनै औचित्य हुँदैन । राष्ट्रपतिलाई हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर अन्तरिम संविधानका २० भन्दा बढी धारा खारेज गरिएको छ । यो अधिकार राष्ट्रपतिलाई कसले दियो ? चार दलको सिण्डिकेटले सिफारिश गर्ने, राष्ट्रपतिले संविधानका धारा खारेज गर्ने अनि त्यसलाई हामीले सहमति जनाएर निर्वाचनमा जाने ? यसो हुनु भनेको सिधैं निरंकुशतालाई समर्थन गर्नु हो ।
यो राष्ट्रिय आकांक्षाबाट प्रेरित भएर भएको काम हैन । कुनै विदेशी शक्तिको डिजाइनमा भएको हुनाले हामीले यथास्थितिमा सहमतिमा आउनु भनेको यी सबै अवैधानिक र राष्ट्रघाती कामलाई स्वीकृति दिएको ठहरिनेछ । यसकारण २५ बुँदे नै खारेज हुनुपर्छ । दुईजना सचिवलाई थप मन्त्री बनाएर यो समस्या हल हुँदैन । चार दलको सिण्डिकेटमा हामी पाँचौं दल भएर अर्को सिण्डिकेट बनाउनका निम्ति हामीले आन्दोलन गरेको पनि हैन ।
२५ बुँदे आदेशका बारेमा कुरै नगर्ने अनि २५ बुँदेको परिणामबाट बनेको निर्दलीय सरकारलाई परिवर्तन चाहिं गर्न नसकिने बरु अरु दुईजना कर्मचारी थपिदिने भनिसकेपछि यसको कुनै अर्थ छैन । २५ बुँदेबाट सुरु भएको प्रक्रिया सच्याएर निर्वाचन गरिन्छ भने हामी निर्वाचनको प्रक्रियामा जान्छौं भनेर हामीले भनेकै हो ।
० त्यसो भए तपाईंहरू निर्वाचनमा जानका लागि सरकार परिवर्तन हुनुपर्ने भो ?
त्यो मात्रै होइन । मुख्य त २५ बुँदे बाधा अडकाउ फुकाउ आदेश हो । त्यो खारेज भएपछि यो सरकार पनि खारेज हुन्छ अनि चार दलको ११ बुँदे पनि खारेज हुन्छ र त्यसपछि यहाँ भएका राजनीतिक दलहरूबीचको सहमतिमा अर्को सरकार बनाएर निर्वाचनमा जाने कुरा आउँछ । यदि त्यो भएन भने यो निर्वाचनको कुनै आचित्य रहँदैन ।